गुगल एनालिटिक्सबाट रेफरल स्पाम कसरी फिल्टर गर्ने
रेफरर स्प्याम सूची: कसरी Google एनालिटिक्स रिपोर्टिंगबाट रेफरल स्पाम हटाउने
मङ्गलबार, डिसेम्बर 1, 2020 बिहीबार, अप्रिल 1, 2021 Douglas Karr
के तपाईंले कहिल्यै गुगल एनालाइटिक्स रिपोर्टहरू जाँच गर्नुभयो मात्र केहि अजीब सन्दर्भहरूमा रिपोर्टहरूमा पप गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईं तिनीहरूको साइटमा जानुहोस् र त्यहाँ तपाईंको कुनै उल्लेख छैन तर त्यहाँ अरू अफरहरू छन्। अन्दाज गर्नुहोस्? ती व्यक्तिहरूले वास्तवमै तपाईको साइटमा यातायातलाई उल्लेख गर्दैनन्।
यदि तपाईंले कसरी महसुस गर्नुभएन भने Google विश्लेषण काम गरिएमा, मूल रूपमा पिक्सेल प्रत्येक पृष्ठ लोडमा थपियो जुन एक टन डेटा लगेर यसलाई गुगलको एनालिटिक्स इन्जिनमा पठाउँदछ। गुगल एनालिटिक्स त्यसपछि डाटा लाई डिसिफर गर्दछ र सफासँग तपाईले हेरिरहनु भएको रिपोर्टहरूमा यसलाई व्यवस्थित गर्दछ। कुनै जादू छैन!
तर केहि मूर्ख स्प्यामिंग कम्पनीहरु Google एनालिटिक्स पिक्सेल पथ डिकन्स्ट्रक्ट र अब पथ नक्कली र तपाइँको Google एनालिटिक्स दृष्टान्त हिट। तिनीहरूले युए कोड कोड स्क्रिप्टबाट पाउँछन् जुन तपाईले पृष्ठमा इम्बेड गर्नु भएको छ र त्यसपछि तिनीहरूको सर्वरबाट, तिनीहरूले GA सर्भरहरू माथि र अधिक हर्दछ जबसम्म तिनीहरूले तपाईंको रेफरल रिपोर्टहरूमा पपिंग सुरू गर्दैनन्।
यो वास्तवमै दुष्ट हो किनकि उनीहरूले तपाईको साइटबाट भ्रमणको पहल पनि गरेका थिएनन्! अर्को शब्दहरु मा, तपाइँको साइट को वास्तव मा तिनीहरुलाई रोक्न को लागी कुनै साधन छैन। म यसका वरिपरिको वरिपरि गएँ र हाम्रो होस्ट जसले धैर्यतापूर्वक उनीहरूले के गरिरहेका छन् भनेर वर्णन गरे र अधिक र अधिक सम्म यो मेरो मोटो खोपडीमा नपुगे सम्म। यसलाई ए भनिन्छ भूत रेफरल or भूत सन्दर्भकर्ता किनकि ती वास्तवमै कुनै पनि समयमा तपाईंको साइटमा कहिल्यै छुदैनन्।
सबै ईमानदारी मा, म अझै पक्का छैन किन गुगल साधारण रेफरल स्प्यामरको डाटाबेस को रखरखाव शुरू गरेको छैन। उनीहरूको प्लेटफर्मको लागि कस्तो राम्रो सुविधा हुनेछ। कुनै भ्रमण वास्तवमै आउँदैन, यी स्प्यामरहरू तपाईंको रिपोर्टको साथ विनाश गर्दैछन्। हाम्रो ग्राहकहरूको एक रेफरर स्पामले उनीहरूको साइट भ्रमणको १!% भन्दा बढी बनाउँछ!
गुगल एनालिटिक्समा सेगमेन्ट सिर्जना गर्नुहोस् जसले रेफरर स्प्यामरहरूलाई ब्लक गर्दछ
तपाईको गुगल एनालाइटिक्स खातामा साईन ईन गर्नुहोस्।
तपाईंले प्रयोग गर्न चाहानुभएको रिपोर्टहरू समावेश गर्ने दृश्य खोल्नुहोस्।
रिपोर्टिंग ट्याब क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि आफूले चाहेको रिपोर्ट खोल्नुहोस्।
तपाईंको रिपोर्टको शीर्षमा, क्लिक गर्नुहोस् + खण्ड थप्नुहोस्
खण्डलाई नाम दिनुहोस् सबै यातायात (कुनै स्पाम छैन)
तपाइँको सर्तहरूमा, निश्चित गर्न निश्चित हुनुहोस् बहिष्कार गर्नुहोस् स्रोत संग मिल्दो regex.
त्यहाँ गीथबमा रेफरर स्प्यामरहरूको अद्यावधिक सूची छ जुन पियविक प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् र यो राम्रो छ। म सूचीलाई स्वचालित रूपमा तल तान्दै छु र यसलाई प्रत्येक डोमेन पछि ओआर स्टेटमेन्टको साथ राम्रोसँग फर्म्याट गर्दैछु (तपाईं यसलाई प्रतिलिपि गरेर टाँस्न सक्नुहुनेछ तलको टेक्स्ट क्षेत्रबाट गुगल विश्लेषकमा)।
सेगमेन्ट बचत गर्नुहोस् र यो तपाईंको खाता भित्र प्रत्येक सम्पत्तीमा उपलब्ध छ।
तपाईं आफ्नो साइटबाट रेफरल स्प्यामरहरू प्रयास गर्न र ब्लक गर्न त्यहाँ धेरै सर्भर स्क्रिप्ट र प्लगइनहरू देख्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न कष्ट नदिनुहोस् ... याद राख्नुहोस् कि यी तपाईंको साइटमा वास्तविक भ्रमणहरू थिएनन्। स्क्रिप्ट्स यी व्यक्तिहरू प्रयोग गर्दै छन् तिनीहरूका सर्वरबाट सिधा FA GA पिक्सेल र कहिले पनी तपाईंको आएन!
टैग: विश्लेषणब्लक रेफरर स्पामGoogle विश्लेषणरेफरर स्पामरेफरर स्पाम सूची
फ्रेशकलर: दूर बिक्री टोलीहरूको लागि भर्चुअल फोन प्रणाली
सर्वव्यापी: एक अनलाइन आरक्षण, बुकिंग, र भुक्तान प्लेटफर्म
जुलाई,, २०१ at 3::2014। बिहान
यी सुझावहरूको लागि धन्यवाद। यो मेरो तथ्याङ्क मा यो कष्टप्रद भएको छ।
1 डिसेम्बर, 2015 बेलुका 5:27 बजे
तपाईं शर्त लगाउनुहुन्छ। हामीले यसको सही समाधान अपडेट गरेका छौं किनकि रेफरल स्प्यामरहरू वास्तवमा तपाईंको साइटमा आउँदैनन्।
रेफरर स्पाम मद्दत (@RefSpamHelp)
मई 6, 2015 मा 1: 03 PM
हामीसँग रेफरर स्प्यामको साथ केहि रिस पनि थियो। हामीले वेबमा फेला परेका केही "समाधानहरू" कोसिस गर्यौं - btw htaccess-manipulaton भूत रेफररहरूबाट रोक्दैन -, GA मा म्यानुअल रूपमा फिल्टरहरू सिर्जना गर्न केही समय बर्बाद गर्‍यौं र अन्ततः हाम्रो स्वचालित समाधान निर्माण गर्‍यौं: http://www.referrer-spam.help ...
हामी आशा गर्छौं कि तपाईंले यसलाई मन पराउनुहुनेछ।
1 डिसेम्बर, 2015 बेलुका 5:28 बजे
र यस्तो देखिन्छ कि भूत रेफररहरू प्रमुख खेलाडी बनेका छन्। हामीले साइटमा सल्लाह अद्यावधिक गरेका छौं। तपाईंले प्रदान गरिरहनुभएको सबै मद्दतको लागि धन्यवाद!
मई 21, 2015 मा 5: 23 PM
यसका लागि तपाईका सबै सहयोगका लागि धन्यबाद!
1 डिसेम्बर, 2015 बेलुका 5:29 बजे
तपाईं शर्त लगाउनुहुन्छ। हामीले यी जर्कहरूले प्रयोग गरिरहेका नयाँ भूत रेफरल विधिहरूमा आधारित सल्लाहलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा अद्यावधिक गरेका छौं।
जुन 11, 2015 मा 3: 16 PM
यहाँ मद्दतको ठूलो टुक्रा, धन्यवाद! अब बाउन्स दर परिवर्तनको लागि धैर्यपूर्वक पर्खनुहोस् 😀
1 डिसेम्बर, 2015 बेलुका 5:50 बजे
मैले गुगल एनालिटिक्सको लागि खण्ड प्रदान गर्न सल्लाह अद्यावधिक गरेको छु। यसरी तपाईले तुरुन्तै प्रभाव देख्न सक्नुहुन्छ।
अगस्ट 5, 2015 बेलुका 4:21 बजे
यो अप्स्ट्रीम / डाउनस्ट्रीम स्प्याम मुद्दाहरू अप्रिय छ: स्प्यामरहरूले यसलाई स्प्याम गर्छन् र त्यसपछि एक उपाय प्रस्ताव गर्छन् - यो मेरो अनुमान हो।
के तपाईंले IP ब्लकहरू वा तिनीहरूलाई फेला पार्नको लागि दायरा छ कि भनेर हेर्नको लागि जाँच गर्नुभएको छ?
अन्य विचारहरू म हेर्न कोशिस गर्दैछु कि अरूले प्रयास गरेका छन्:
1) म भन्छु कुकी रिसेट गर्नुहोस् लामो सत्र समय भ्रमणको रूपमा गणना गर्न तर बटहरूले साइट पिङ गरिरहनेछन्। यी चीजहरूलाई DDoS आक्रमणको रूपमा व्यवहार गर्न आवश्यक छ किनभने तिनीहरूले भौतिक स्रोतहरू निकाल्छन्
2) नयाँ प्रोफाइल बनाउनुहोस् र Google ट्याग प्रबन्धकमा नयाँ कोड राख्नुहोस् ताकि कोड स्किम गर्न सजिलो नहोस्। साथै, नयाँ खाता बनाउने र4प्रोफाइलहरू जस्तै बनाउने ताकि अन्तिम नम्बर -1 मा समाप्त हुँदैन अर्को विचार हो। तर, म यस बिन्दुमा अनुमान गर्दैछु कि स्प्यामरहरूले UA नम्बरहरू स्वचालित रूपमा उत्पन्न गर्दैछन् वा UA नम्बरहरू सबै सँगै बेवास्ता गर्दै र अभियान url बिल्डर उपकरण प्रयोग गर्दैछन्।
अगस्ट 13, 2015 मा 6: 06 AM
नमस्ते, महान मार्गदर्शक, मैले एक नि: शुल्क उपकरण निर्माण गरेको छु जसले विश्लेषणहरू पहुँच गर्दछ र तपाईंको साइटको लागि htaccess फाइल बनाउँछ, यो नि: शुल्क। http://refererspamtool.boyddigital.co.uk/ यसलाई जान दिनुहोस्
अगस्ट 14, 2015 बेलुका 10:20 बजे
कोलिन, यो एक शानदार उपकरण हो! म यसलाई पोस्टमा थप्न जाँदैछु!
डन शिन्डलर (@donschindler)
8 डिसेम्बर, 2015 बेलुका 4:50 बजे
उत्कृष्ट सामान, डगलस।
8 डिसेम्बर, 2015 बेलुका 5:50 बजे
धन्यवाद डन! आशा गरौ सब ठिक छ।
डिसे 22, 2015 मा 10: 27 AM
साँच्चै उपयोगी…. यस प्रकारको स्प्याम ट्राफिक एनालिटिक्समा गडबड रिपोर्टहरूको लागि नम्बर एक कारण हो, जसले ग्राहकहरूलाई साइटले कसरी प्रदर्शन गरिरहेको छ भनेर देखाउन मद्दत गर्दैन।
जनवरी 1, 2016 12:55 बजे
धन्यबाद मेरो वेबसाइट स्प्याम भरिएको छ र एड्सेन्सले मलाई प्रतिबन्धित गर्‍यो
जनवरी 3, 2016 6:10 बजे
स्पाम आजकल एक ठूलो मुद्दा बनिरहेको छ। यद्यपि, यो पोस्ट तपाईंको साइट वा मानिसहरूले वास्तवमा तपाईंको साइट स्प्यामिङको बारेमा होइन। तिनीहरू गुगल एनालिटिक्स बाहिर जाली गर्दै छन्। यसले तपाइँको Adsense लाई असर गर्नु पर्दैन, तर तपाइँको गुगल एनालिटिक्सलाई गडबड गर्नेछ।
जनवरी 19, 2016 मा 8: 30 एएम
म साँच्चै यो स्प्याम संग थाकेको छु। मलाई आशा छ कि यसले मलाई मद्दत गर्नेछ।
जनवरी 19, 2016 मा 11: 32 एएम
म पनि त्यस्तै छु। म विश्वास गर्न सक्दिन कि गुगलले यसको लागि समाधानको साथ आएको छैन।
जनवरी 19, 2016 मा 10: 33 एएम
उत्कृष्ट टुक्रा, विगतमा यससँग केही समस्या भएको थियो र धेरैजसो मानिसहरूलाई थाहा छैन कि यो चलिरहेको छ!
जनवरी 19, 2016 मा 11: 31 एएम
धन्यवाद र म सहमत छु... मलाई वास्तवमा लामो समयदेखि के भइरहेको थियो थाहा थिएन, या त!
जनवरी 24, 2016 मा 9: 14 एएम
तपाईंको लेख डगलस को लागी धन्यवाद। महान पढाइ। म स्प्यामलाई पूर्ण रूपमा घृणा गर्छु, यसले विगतमा मेरो वेबसाइटहरूको लागि धेरै समस्याहरू निम्त्याएको छ, कहिलेकाहीँ मेरो वर्डप्रेस साइटहरू क्र्यास भएको थियो जब मसँग वर्डप्रेसको पुरानो संस्करण थियो।
निश्चित रूपमा मेरो साइटमा यो लेख साझा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
म हाल मार्केटरहरूको लागि WordPress ब्लग सुरु गर्दैछु।
मई 1, 2016 मा 11: 28 एएम
नमस्ते डगलस .. मसँग एउटा प्रश्न छ। मैले com.google.android.googlequicksearchbox / .com बाट केही भ्रमणहरू पाउँछु
के यसमा स्प्याम समावेश छ? उत्तरको लागि धन्यबाद
मई 3, 2016 मा 10: 26 एएम
नमस्ते Fauzy, मलाई विश्वास छ कि यो एक वैध रेफरर हो गुगल एन्ड्रोइड मोबाइल एप.
अगस्ट 11, 2016 मा 10: 46 AM
भूत रेफरल किन हुन्छ, यी स्प्यामरहरू के त्यसबाट बाहिर निस्कन्छन्?
अगस्ट 11, 2016 मा 10: 49 AM
यो इमानदारीपूर्वक साँच्चै निराशाजनक छ। मात्र फाइदा यो हो कि कम परिष्कृत एनालिटिक्स प्रयोगकर्ताहरूले रेफरर खोज्नेछन् र तिनीहरूको उत्पादन वा सेवाहरू किन्न सक्छन्। यो कम जानकार साइट मालिकहरूलाई छल गर्ने प्रयास गर्ने एकदमै सस्तो र हास्यास्पद माध्यम हो।